'Uyamthanda kwaye umoyike ngaxeshanye' -I-WWE Legend ityhila indlela eyayiziva ngayo ukuba ulwe no-Undertaker - Wwe
'Uyamthanda kwaye umoyike ngaxeshanye' -I-WWE Legend ityhila indlela eyayiziva ngayo ukuba ulwe no-Undertaker
U-Kurt Angle uvule malunga namava okusebenza no-Undertaker ngexesha lopapasho lwakutshanje lwe-podcast yakhe ejikeleze i-SummerSlam 2000 nawo onke amabali aphezulu ukusukela kuloo nyaka.
U-Kurt Angle utyhile ukuba ngelixa kwakulula ukusebenza no-Deadman, u-Undertaker wayethandwa kwaye esoyika ngaxeshanye ngetalente backstage. I-WWE Hall of Famer yathi u-Undertaker wayehlala ekhokelwa kwinqanaba kodwa wayeza kuthatha amanyathelo ayimfuneko xa elinye iqela lisenza into engathandekiyo.
U-Undertaker ebeyinkokeli yegumbi elitshixwayo elihlonitshwayo kwi-WWE iminyaka emininzi, kwaye u-Angle uthe akukho mntu unokuphambanisa nalowo wayesebenza naye ngaphambili.
U-Angle ukwakhumbuze umamkeli-zindwendwe uConrad Thompson ukuba u-Undertaker uphantse wamkrwitsha malunga nodumo ' Cwangcisa ukukhwela esihogweni. '
Angle uthe oku kulandelayo:
Umthathi wayelungile ukusebenza naye. Kwakulula ukuvana naye. Ubumthanda kwaye umoyika ngeloxesha. Wayenoluhlobo nje ngaye lokuba wayepholile, ezolile, kwaye eqokeleleke, kodwa ukuba uphume emgceni, wayeza kwenza into. Undikhuphe ngenqwelomoya kanye xa bendisilwa noVince McMahon. Ke, awufuni kuphazamisa u-Undertaker, utshilo uKurt Angle.
Ikwayalingana efanayo ngalo lonke ixesha, kodwa iyasebenza: UKurt Angle ngendlela u-Undertaker abeke ngayo umdlalo
UKurt Angle wajongana no-Undertaker okokuqala kumdlalo ongatshatanga ngo-2000, emva xa iqhawe leOlimpiki yayiseyinkwenkwezi ekhulayo kwinkampani.
I-Angle ilahlekelwe ngu-Undertaker kumdlalo wemizuzu esi-8 njengoko ebesakhula njengomdlali weqonga. UKurt Angle wayibiza ngokuba 'ngumdlalo wokuphakama' kuye njengoko wayeza kwabelana ngendandatho kunye netalente esekwe njengo-Undertaker.
IHero leOlimpiki kunye noThe Deadman bavala iimpondo amatyeli aliqela njengoko iminyaka yayihamba, kwaye uAngle waphawula indlela u-Undertaker ahlala elandela ngayo isicwangciso esiqinisekileyo somdlalo ngamnye.
Ngomdlalo weWorldweightweight kwi-line, @RealKurtAngle & @iamfanlalisa wadibana neklasikhi yexesha lonke kwiWWE Akukho Ndlela yokuphuma ngo-2006!
UMDLALO OKUQHELEKILEYO: https://t.co/tXgzrFNO0k
Ngokunyanisekileyo @WWenetwork . Replying to @zamakangcobo
-WWE (@WWE) NgoSeptemba 1, 2020
U-Kurt Angle ucacisile ukuba u-Undertaker uqale wasebenza engalweni kwaye wazama 'ukukhanya' kubachasi bakhe. Eli yayilinqanaba lomdlalo apho iPhenom yenze khona uphawu lwentengiso, kubandakanya 'iSikolo esiDala.'
U-Angle uthe umfutho uguqukile xa u-Undertaker etshayisa idolo lakhe kwi-turnbuckle, esenza ukuba kwenzeke ukonzakala kwebali kumdlalo ukuze isithende sisebenze de kubuye ukubuyela kwakhe.
I-WWE Legend yongeze ukuba u-Undertaker wabiza umdlalo wabo kanye phambi komlo we-babyface kunye nokugqiba.
Ubiza yonke into de abuye kwaye agqibe, utshilo uKurt Angle, 'Umele umphulaphule kwaye umthembe, kwaye nam ndenzile. Ngalo lonke ixesha ndisebenza no-Undertaker, ulingano olufanayo kuwo wonke umdlalo. Uyakukhanyisela, usebenza ingalo yakho, uyazi, uyaxhuma kwintambo ephezulu, ndiyilibele ukuba ibizwa ntoni. Ewe, iSikolo esiDala! Ke, usebenza ingalo yethu, kwaye xa sele egqibile ukukhanyisa, uyakukukhupha idolo, kwaye uyazi, uzakubalekela ekoneni ngebhutsi ephezulu, kwaye ndiza kuhamba, kwaye izokwenzakalisa umlenze wakhe. . Kwaye, ikulinganayo ngokufanayo ngalo lonke ixesha, kodwa iyasebenza. Uyazi, kuye, yayigqibelele. Ke yile ndlela yayihlala ihamba ngayo no-Undertaker, kodwa wayibiza yonke loo nto de wabuya kwaye wagqiba. '
Ukuphosa umva xa u-Undertaker wayenxibe le gear ring ring Vs Kurt Angle. pic.twitter.com/my2WVyd0d7
-Ukulandela abalandeli bakho‼ ️ (@ Fiend4FolIows) NgoSeptemba 20, 2020
U-Kurt Angle kunye no-Undertaker baye baba neemfazwe ezingalibalekiyo kule minyaka idlulileyo, kwaye ayothusi into yokuba iPhenom ilungelelanise isenzo se-in-ring.
Ukuba kukho naziphi na iikowuti ezisetyenzisiweyo kweli nqaku, nceda uthenge ityala ngeKurt Angle Show AdFreeShows.com kwaye unike i-H / T kwi-Wrestling Wrestling.
ngubani owona mlo mde mde
ukubhalwa nini emva komhla wokuqala
kutheni engafuni ukutshata
Iindlela zokuzola xa unomsindo
Ngaba iliwa kunye nokulawula kwamaroma kuhambelana
iziqhulo ezimnyama tik tok